Somaliland.Org » DALJIRE: Ilaahay baa wax ciqaaba – By A Geeljire
DALJIRE: Ilaahay baa wax ciqaaba – By A Geeljire
December 28th, 2007 Comments Off (Ilaahay baa wax ciqaaba)
Dubbe:Waaar heedhe maalin walba wax cusub baynu arkaynaa. Bal iminka ninkan Ina Rayaale muxuu inoogu cadhaysan yahay? Ma dayn buu nagu leeyay?
Doolaal:Oo waayo? Waa maxay cadhadaad sheegaysaa?
Dubbe:Ma dhegeysatay waraysigii Voice of America ay la yeelatay? Mase u fiirsatay ficilkiisa iyo wuxuu samaynayo beryahan dambe?
Doolaal:Oo haddaan dhegeystay muxuu yidhi? Caadi bay aniga ila ahayde. Wax walba waxaad ka soo saaraysaan waxaan jjirin qoladiinan mucaaradka ahi.
Dubbe:Horta waa mide waxaan arkay ninkii oo “aniga, aniga, aniga” uun leh oo fartaas uun laabta iskaga haya oo boqor isu qaatay. Waa ta labaade hadalkiisa mid qudha oo madaxweynimo ah oo dad usu soo dhaweyn kara laguma arag.
Doolaal:Maxaad iminka sheegaysaa?
Dubbe:Saddex qolo oo uu soo qaaday haddaan tusaale kaa siiyo waad arkaysaa kibirka ninkaa ku jira iyo cadhada. Madaxdhaqameedyada reer Sool ee inaga soo hor jeeda mar wax laga weydiiyay wuxuu yidhi. “nimankaasii waxay doonaan ha ku hadlaan iyagaa iska hadlay.” Madaxweyne hadalkiisu wuxuu noqon lahaa. “nimankaasi way qaldan yihiin inay colaad ku baaqaan iyo dagaal may ahayn iminkana waxaanu ku soo dhoweynaynaa inay nabadda ku soo noqdaan oo umaddooda wanaag u horseedaan oo nagala shaqeeyaan dhismaha gobolka iyo ka dalkaba. Kacfo furan iyo isa saamaxaad Somaliland u dhaqan ah ayaan ku soo dhowaynayaa.”
Mar wax laga weydiiyay Qarana wuxuu isku deyey inuu umadda runta ka jeediyo oo wuxuu mar walba ku celcelinayay distoorku saddex xisbi wax ka badan ma oggola. Taas oo runtii ah laakiin ah run yar oo uu kala jiidhay sida cinjirka. Run la kala jiidayna been kama foga. Waxa laga hadlayaa maaha xisbiyo. Waxa laga hadlayaa in la furto waa ururro siyaasadeed oo tartama oo la kala reebo oo saddex xisbi ka soo hadhaan sida distoorku sheegayo. Ta ay Qaran codsanaysaanna waa taa. Xeer u diidayaanna ma jiro.
Ta kale ee uu ka jawaabay waxay ahayd saxaafadda oo uu caayay oo uu beenaalayaal ku sheegay